Gbasara Anyị | Importgbọ M Mbubata
Anyị na-enyere aka ịdebanye aha ọtụtụ narị ụgbọ ala na United Kingdom kwa ọnwa. ahụigodo_arrow_down
Ebe ọ bụla ụgbọ ala gị dị n'ụwa, anyị ga -enwe ike ijikwa usoro niile nke mbubata na ndebanye aha gị.
Anyị nwere ndị ọrụ mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ na kọntinent ọ bụla iji nye anyị ihe ọmụma na ntụkwasị obi mpaghara ebe ọ bụla ụgbọ ala gị dị.
Anyị bụ naanị ndị na-ebubata ụgbọ ala na UK ka anyị tinye ego dị ukwuu na ụlọ ọrụ nyocha DVSA akwadoro maka saịtị anyị. Nke a pụtara na ndị nyocha DVSA na-eji ụzọ nnwale anyị na-ewepụta ụdị nnabata ọ bụla maka ụgbọ ala ndị ahịa anyị.
Vehiclegbọ ala gị ga-abata na ụlọ anyị ma hapụ aha ya nke ọma na-enweghị mkpa ka eburu ya gaa na ngalaba DVSA. Site na ọnụnọ anyị zuru ụwa ọnụ na itinye aka na-aga n'ihu n'akụkụ niile nke nnabata UK, anyị bụ ndị isi ahịa n'ọhịa anyị. Ma ị na-ebubata ụgbọ gị, na-ebubata ọtụtụ ụgbọ ala ma ọ bụ na-anwa ịnweta ụdị nkwenye dị ala maka ụgbọ ala ị na-arụpụta, anyị nwere ihe ọmụma na akụrụngwa iji mezuo ihe niile ị chọrọ.
Anyị bụ ndị United Kingdom na-ebute ụzọ mbubata ụgbọ ala.
Yabụ nweta kọntaktị maka ahụmịhe mbubata ụgbọ ala na-enweghị nsogbu.